TapSense: Nduzi zuru ezu maka ire ahia nke 2014 | Martech Zone
Site na ntiwapụ nke smartphones ndị dị ọnụ ahịa na ahịa na nchịkọta data dị ọnụ ala, echeghị m na atụmatụ ọzọ ebilila ngwa ahịa ahịa. O di nwute, ọ bụkwa usoro a na-anabataghị ngwa ngwa dịka uto ya na ewu ewu. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị etinyeghị usoro ịzụ ahịa mkpanaka, ozi ọma ahụ bụ na akụrụngwa kachasị mma ka na-eguzobe.
TapSense ewepụtala usoro dị egwu maka ire ahịa ekwentị. Ọ bụ ngwakọta nke mbọ nke aka ha, yana ọrụ sitere na ụfọdụ ndị isi dị ikike na ụlọ ọrụ na-ere ahịa mkpanaka. Ebumnuche ha bụ ịmepụta ntuziaka nke echiche kachasị ọhụrụ, na-enwu gbaa, na nke kachasị emetụta usoro oghere mgbasa ozi. Ọ bụrụ n ’ị na-achọ itinye ngwa mkpanaka, ntuziaka ga - enyere gị aka - ga - ejegharị gị site na usoro mkpebi niile iji bulie nkwalite.
Fọdụ n'ime teknụzụ ekwentị ọhụụ nke na-ewu ewu bụ ịgba ọsọ oge (RTB), usoro mgbasa ozi mkpanaka ọhụụ - gụnyere 5-vidiyo vidiyo vidiyo mkpanaka, na Facebook Exchange - nke ga-achịkwa oghere mgbasa ozi mkpanaka. Na mgbakwunye, onye ndu ahụ na-abanye n'ime isiokwu dịka:
Ihe Mere Ndị Ahịa Ekwentị Ga-eji Lekwasị Anya na Ngwa Smartphone
Ndụmọdụ iji bulie ahịa gafee ọwa efu
A Guide to the Mobile Marketing KPIs Nke Onyeisi Gị Na-eche Banyere
Ihe Anọ Mere Ndị Ahịa Mobile Ji Chọọ Mmetụta Mgbasa Ozi Ndị Azụ nke atọ
Kpọtụrụ bụ a mobile ahịa n'elu ikpo okwu na-enye ebinyeghị akụkụ ọ bụla ọzọ mmesho gafee free na-akwụ ụgwọ ọwa. Site na otu dashboard, ndi ahia nwere ike ijikwa ma bulie mkpọsa ekwentị n’ime narị narị ndị nkwusa. Ihe karịrị ndị ahịa 100 enweela ihe ịga nke ọma na TapSense, gụnyere: Fab, Redfin, Trulia, Expedia, Viator, Amazon na eBay.
Tags: 2014mobile ngwamobile ngwa ọdịnalaahịa efundu ahia mkpanakaomume ahia ahiasmartphone ngwatapsense
Daalụ maka ịkekọrịta nnukwu ọgụgụ Doug! Ọ bara uru n'ezie…